Mapepanhau Haana Kufa, Kutengesa Nhau Kufa | Martech Zone
Mapepanhau Haana Kufa, Kutengesa Nhau kwakafa
Svondo, Kurume 25, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Dave Winer, Robert Scoble, Scott Karp, Mathew Ingram, uye toni yevamwe vanga vachinyora nezve blog yaRobert, Mapepanhau akafa.
Ndichatora danho mberi… kutengesa nhau kwafa.
Ikoko. Ndazvitaura. Sezvo ndashanda kweanopfuura makore gumi muindasitiri yemapepanhau, ndinoreva. Icho chokwadi ndechekuti mapepanhau haatengesi nhau zvakare mune zvakanyanya sekutengesa kwavo kushambadza. Nhau idzi dzave dzechipiri kutengesa kwepepanhau kwenguva yakati rebei. Mapepanhau akapenda ruvara kutengesa kushambadzira. Mapepanhau aishandisa masisitimu epahedheni kutengesa kushambadza Mapepanhau akavaka matsva emapepanhau kuitira kushambadza kwemhando yepamusoro. Mapepanhau ava kutengesa tsamba dzakananga, magazini, zvinyorwa zvetsika… kwete nekuti vanotengesa nhau asi nekuti zvinowedzera mari yekushambadzira.
Vatori venhau vazhinji vachatsamwiswa nemashoko angu. Ndine urombo zvechokwadi nekuti ndinoremekedza zvikuru vatori venhau. Famba uchienda mune chero imba yenhau, zvisinei, uye iwe uchaona mabhajeti akachekwa, vapepeti vachishanda vashoma-ruoko, mapepanhau achizadza maburi ne AP zvemukati. Vaparidzi vari kutsikisa kushambadza, kwete nhau. Nhau ndidzo dzinozadza pakati pezviziviso nekuti kushambadza kunounza mari.
Maitiro mazhinji ekufambisa pamapepanhau anonyatsoisa mashambadziro kupfuura nhau… "Tenga Pepanhau reSvondo uye uchagamuchira mari inodarika zana emadhora mumakoponi." Handigone kufungidzira kuti zvinoita sei kuti mutori wenhau anzwe… ari kuiswa zvisirizvo nekoponi makumi maviri neshanu yemapepa etoilet.
Ini handifungi chaizvo kuti izvi zvakasiyana zvakanyanya nekushanduka kwemamwe maindasitiri, zvakadaro. Fungidzira hunyanzvi hwaifanirwa kuve hunyanzvi hwekuburitsa micrometer maseti uye kuvaka injini dzemotokari. Ivo machinists vaive maartist, vachidzidza basa ravo pamusoro pemakore mazhinji, vachienda kuzvikoro zvehunyanzvi, vachidzidzira simbi yepamusoro, masvomhu, uye mashandiro emichina inorema. Fembera chii? Ivo vakatsiviwa, zvakare. Cnc Zvigayo nemarobhoti zvakatsiva vanhu vane hunyanzvi. Mumwe anogona ikozvino kugadzira pakombuta uye ipapo ipapo kuburitsa zvikamu zvavo pasina kupindira kwevanhu.
Izvi zvinoreva here kuti Machinist havaremekedzwe? Zvirokwazvo kwete. Ivo vakango tsiviwa. Vatori venhau vari kutsiviwa, futi. Ndinoziva, ndinoziva… vatori venhau vane basa, vakadzidza, vanoongorora zvinyorwa, ndivo vane basa nemashoko avo. Izvi zvese ndezvechokwadi asi economics ndiyo inopedzisira yakunda. Tarisa nhau dzemanheru kana verenga pepanhau uye ini ndinokuvimbisa kuti iwe uchaona kana imwechete inotaura nezve blog, vhidhiyo yakadhindwa, kana webhusaiti. Nhau idzi hadzisi kuzowanikwa nekuparadzirwa nevatori venhau, zviri kuwanikwa neni newe uye nekuparadzirwa kuburikidza neInternet.
Chii chaicho chaitika apa ndechekuti vatengi ' vanoda nokuti kutenga nhau dzaenda. Vatori venhau nemapepanhau ndivo vaive sosi pakati penzanga nenhau. Pakanga pasina dzimwe sarudzo. Zvino sarudzo hadziperi uye dzakachipa. Hunhu hwakamira here? Zvichida. Zvakafanana nekufananidza Wikipedia neEncyclopedia Brittanica. Wikipedia ine exponentially rumwe ruzivo uye haina mari peni. Brittanica ine chidimbu chezvinyorwa asi iri nani mhando. Wakapedzisira riiniko kutenga enisaikoropidhiya? Ndiyo mhinduro yako.
Chokwadi ndechekuti ndinogona kunyora nezvazvo YeBlogbar nyowani yeGoogle. Iyo posvo inogona kunge iine zviperengo uye grammatical zvikanganiso, inogona kushomeka mareferenzi, inogona kunge isingavaraidze sezvaizoita pane iyo Times Technology peji - asi yakasvika zviuru zvevaverengi avo vakatendeseka vasina hanya nezve izvo zvinhu. Vakatenda kuti ndakanyora nezvazvo uye vava kushandisa izvo zvemukati kuvandudza masaiti avo. Izvo hazvina kutora mutori venhau kuti aputse nyaya.
Iyo Internet ndiyo nyowani nyowani iri kutsiva nhau pamapepa uye vatori venhau. Izvo zvinosuruvarisa, iko kunakidza kutengeserana kuri kuzonyangarika. Pachave nevatori venhau, kwete vakawanda. Pachave paine mapepanhau, kwete seakawanda. Ngatizvitarisei, zvakadaro. Mapepanhau acharamba achiwana dzimwe nzira dzekutengesa kushambadza. Inogona kunge isiri inki pamiti yakafa, asi ivo vanowana nzira.
Mapepanhau haana kufa, kutengesa nhau kwakafa.
Email Kupindura Management
Ndoziva wandiri kuvhotera
Mar 25, 2007 pa 8: 20 PM
> Mapepanhau ava kutengesa tsamba dzakananga, magazini, zvinyorwa zvetsika?
Ini ndinogona kunyatsoenderana neizvozvo. Pepa redu kaviri pasvondo rine mapepa akawanda mukati meChipiri kupfuura zvazvinoita mapeji enhau.
Zvakawanda semimhanzi uye maindasitiri emamuvhi indasitiri yemapepanhau inofanirwa kutsvaga nzira nyowani dzekuzvitengesa - dziite chiitiko chezuva nezuva icho vanhu vasina hanya nekuburitsa 1.50 ye.
Izvi zvinotoenda zvakanyanya kune iro guta diki mapepanhau emuno
Mar 25, 2007 pa 10: 07 PM
Ndinoda pfungwa yako maererano nenhau dzemuno. Ndichiri kunakidzwa nebepanhau redu reBusiness pano munharaunda pamwe nepepanhau rangu reKunharaunda. Ivo vachiri vane mukana wakakura pamusoro pemambure - kubatana kwavo kunharaunda.
Zvinotoshamisa ndezvokuti mapepanhau makuru ese anoramba achitengesa kune hofori hombe dzinoisa nhau mberi. Pano muIndy, iyo Nyeredzi ndeyaGannett. Gannett anoenderera mberi nekucheka zviwanikwa zvemuno uye kuyedza kusundira zvakanyanya kumakambani kuburikidza nehurongwa hwekubatanidza. Iri kucheka bepa kubva munharaunda, zvakadaro. Kuzviuraya.
Izvo hazvina kukodzera kuti ini nditenge bepa. Ndakaita saizvozvo ZUVA rega rega kweanopfuura makore gumi. Ini ndinogona kutaura pachokwadi kuti ini handina zvishoma ruzivo rwekuwana dzangu nhau dzemahara online.
Mar 25, 2007 pa 10: 16 PM
MuCanada - kunyanya Ontario zvose mapepanhau madiki ndeayo eimwe yenhau mbiri hofori. Ini handifunge kuti kune chero mapepanhau akazvimiririra akazvimirira ehumwe mhedzisiro wakasara mune diki kuti midsize mataundi kana maguta.
Izvi zvakafadza ove makore mashanu kusvika gumi ekupedzisira uko hofori mbiri idzi dzakaenda kunotenga. Ndinofunga isu takanyatsorasikirwa nechimwe chinhu chakakosha pakaitika izvozvo.
Mar 26, 2007 pa 2: 07 PM
Chinyorwa chakanaka! Handifunge kuti izvi zvinofanirwa kunge zvichishamisa - zvese kubvira dandemutande parakatanga kuuraya mapepanhau ave nedambudziko, kana kuti angadai akaona kuti dambudziko raive munzira.
Paul A. Musasa
Apr 12, 2007 pa 9: 48 AM
Dambudziko mapepanhau haana KUTENGESA nhau kwemakumi emakore. Pakambove nehondo dzemapepanhau pamusoro penyaya dzinopisa. Hondo yekupedzisira yerudzi urwu yaigona kurangarirwa rini?
Mupepeti mukuru wepepanhau anofanirwawo kuve mutengesi kwazvo uye mukuru wekushambadzira. Rwendo kune chero hombe sitendi huru rinogona kuratidza kuti izvi hazvisizvo munyika yanhasi.
Tarisa kumabutiro epamberi emagazini patabhenefiti ichienzaniswa nemapeji ekutanga emapepanhau akaratidzirwa ipapo. Mumwe anogona kutaura kuti mazhinji emagazini anoshandisa "zvakachipa makumi manomwe neshanu-Nzira-dzeKuzorodza-Dzako-Bonde-Hupenyu hunyengeri" kutengesa vaverengi. Zvakadaro hapana kuramba kwekuti mapepanhau zvakarongeka pasi pekutengesa kwavo nhau uye vanopa zvemukati kune vaverengi. Zvinoita sekunge isu tinoshanda kuti peji rekutanga riwedzere kufinha uye risanyanya kukosha kupfuura zvarinofanira kuve.
Vapepeti vanopokana kuti kuve "vekusimudzira" kunoderedza bhizinesi ravo. Ndingati nhepfenyuro yepamusoro, yakakosha, yekuongorora iyo inokunda gore rino Pulitzer haina kukosha kana ruzhinji rwevatengi vepepanhau vasinganetseke kuverenga zvakateerana.
Tinofanira kuwana zvakanaka pakutengesa nhau zvakare. Tinofanira kuwana kugona kutaurira vaverengi zviri mazviri kana vakaverenga.
Mukupedzisira tinofanirwa kufara nezvenhau uye nezvimwe zvirimo zvatiri kuendesa zuva nezuva, vhiki nevhiki uye pamwedzi pachedu tobva taudza mufaro iwoyo nenzira inotapukira kune avo vatinotarisira kusvika nekutungamira nenhau. Kana isu sevapepeti tichiita basa iri, madhora anotevera uye mapepanhau (zvisinei nekuti anounzwa sei) achabudirira.